anish ali – अनलाइन खबर
Author: anish ali
No Comments on डाक्टर बन्न चाहेकी केकी कसरी बनिन् अभिनेत्री ?
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, उनको नामको अर्थ । नामले पनि उनको सुन्दरतासंग मेल खान्छ । सबै कुरामा तालमेल मिलेकि उनि हुन् नायीका केकी अधिकारी । केकीको अर्थ चराहरुकी रानी मानिने मयुर भन्ने हुन्छ । नाम र कामको तादम्यता हुनु निकै दुर्लभ कुरा हो । तर, केकी यसर्थमा पनि भाग्यमानी छिन् कि उनका अभिभावकले नाम राख्दाको भविष्यवाणी सफल भएको छ । केकीको प्रतिभा र सुन्दरताको अगाडि यी आवरणको मयुरीकरण फिक्का सावित हुन्छ । केकीको कलिलो उमेरमै सफलताका पछाडि मेहनत, […]
No Comments on यो कुनै बाहाना होईन समृद्धिको दिशातर्फ जानु सरकारको दायित्व र बाध्यता दुवै हो : : मन्त्री पुन
काठमाडौं, ९ चैत । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । शुक्रबार आर्थिक पत्रकार समूह (सेजन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पुनले अब सरकार कुनै बहानामा विकासबाट पन्छिन नपाउने बताए । राजनीतिक दलले घोषणा गरेको समृद्धिको दिशातर्फ जानु सरकारको दायित्व र बाध्यता दुवै भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।उनले स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रसँग जलविद्युत् उत्पादनमा सहकार्य गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताए । मन्त्री पुनले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा परेको अप्ठ्यारकाबारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको […]
No Comments on विदेश जान चाहनेलाई खानेबस्ने सुविधा सहित निःशुल्क सीप तालिमकाे अवसर
काठमाडौं, माघ १८ – के तपाईं रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने सीप सिकेर जाँदा मात्रै तपाईंले विदेशमा राम्रो काम र तलब पाउन सक्नुहुन्छ । कामदारको धेरै माग रहेको खाडीका देशमा चाहिने सीप सित्तैमा सिक्न पनि पाइने भएको छ । नेपाल सरकार तथा स्विजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास नेपालले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरिसकेकालाई निःशुल्क तालिम दिन लागेको हो । पुरुष कामदारले मेसन (डकर्मी) र सटरिङ कार्पेन्टर (फर्मा लगाउने) सीप […]
No Comments on काठमाण्डौमा मौलाउँदै अनलाइन वेश्यालय: कलेज गर्ल देखि मोडेल कतिपर्छ एकरातको ?
काठमाण्डौमा यसरि मौलाउदै ई–वेश्यालय, कलेज गर्ल देखी मोडलसमेत एक रातको १० हजारदेखि पचास हजारसम्मप्रविधिको पहुँच र यसको दु्रत विकासले मानव जीवनका धेरै पक्षमा सहयोग पुगेको छ तर यही प्रविधिमा सरकारी निकाय र प्रहरीको पकड मजबुत नहुँदा विकृतिले समेत जरा गाडेको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि इन्टरनेटबाटै सञ्चालित वेश्यालयका विषयमा दीपक खरेलले खोजीनीति गरेका छन् ।उनी पेशाले ‘क’ श्रेणीको बैंकका सहायक प्रबन्धक हुन् । अविवाहित उनी शनिबारका दिन उनले रोजेका मान्छेसँग उनकै रोजाइको स्थानमा बित्ने गर्छ । केही दिनअघि […]
कस्तो अचम्म ! पूर्व प्रधानाध्यापक गाउँपालिकामा कार्यालय सहयोगी
No Comments on कस्तो अचम्म ! पूर्व प्रधानाध्यापक गाउँपालिकामा कार्यालय सहयोगी
करीव आठ वर्ष विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएर काम गर्नुभएका हेमन्तबहादुर थापा अहिले गाउँपालिकामा कार्यालय सहयोगी हुनुभएको छ । विद्यालयमा पढाउदा तलब नै नपाएपछि दार्मा गाउँपालिका–४ भल्चौरका उहाँ दार्मा गाउँपालिकामा कार्यालय सहयोगी हुनुभएको हो । दार्मा–४ मा रहेको वाल कल्याण प्राथमिक विद्यालयमा २०६६ सालदेखि निजी स्रोतमा पढाइरहनुभएका थापाले दुइ वर्षदेखि तलब नपाएपछि गाउँपालिकामा कार्यालय सहयोगीमा काम गर्न थालेको बताउनुभयो । विसं २०६६ मा रु एक हजार २०० तलब लिएर पढाउन शुरु गर्नुभएका उहाँ २०६९ सालमा प्रधानाध्यापक हुनुभएको थियो । “थोरै […]
फेसबुक लाईभमै आमा छोरीको टंग किस, हेर्नुहोस अर्चनाका आमाछोरीको चर्तिकला ( भिडियो
No Comments on फेसबुक लाईभमै आमा छोरीको टंग किस, हेर्नुहोस अर्चनाका आमाछोरीको चर्तिकला ( भिडियो
नग्न तस्वीर सार्वजनिक गरेर पोर्नस्टारको अभ्यास गर्ने एक युवतीले पोर्न फिल्म बनाएरै छाड्ने बताएकी छिन् ।कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरस्थित भाँसी घर भएकी १७ वर्षीय अर्चना पनेरुले आफू पोर्नस्टार बनेर ब्लू फिल्म बनाउने दाबी गरेकी हुन् । आफ्नी आमा सुनिता पनेरुको सहयोगमा उनले केही दिन अघि पोर्नस्टारको अभ्यासका क्रममा घरमै नग्न तस्वीर खिचेर सार्वजनिक गरेकी थिईन् । नग्न तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई अश्लीलता फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीको फन्दाबाट छुटेपछि आमा छोरीले पोर्नस्टारको सपनालाई कुनै हालतमा पुरा […]
जति गरेपनि मेटिँदैनथ्यो श्रीमतीको यौन इच्छा, साथीहरु मिलेर पनि चित्त बुझाउन नसकेपछि अन्तमा
No Comments on जति गरेपनि मेटिँदैनथ्यो श्रीमतीको यौन इच्छा, साथीहरु मिलेर पनि चित्त बुझाउन नसकेपछि अन्तमा
एजेन्सी। आफ्नी श्रीमतीको यौनको चाहनाले आजित भएका एक युवकले श्रीमतीकै हत्या गरिदिएका छन् । श्रीमतीले जतिबेला पनि यौन सम्पर्क गर्न खोजेपछि आजित भएका ती युवकले रिसको झोंकमा श्रमितीकै हत्या गरिदिएका हुन् । भारतको छत्तीसगढको विलासपुरका ३० वर्षका ती युवकले श्रीमतीको हत्या गरेपछि आफैं प्रहरीमा गएर आत्मसमर्पण गरेका छन् । ती युवककी श्रीमती निम्फोमेनियाबाट पीडित थिइन् । यो स्वास्थ्य समस्या भएकालाई जतिबेला पनि यौन इच्छा हुन्छ । प्रहरीका अनुसार निम्फोमेनियाबाट ग्रस्त पत्नीका कारण उनको हत्या गरिएको यो भारतमै पहिलो […]
No Comments on स्थानीयले बन्द गरिदिए प्रचण्ड हिँड्ने खुमलटार सडक
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गत पुसमा लाजिम्पाटबाट खुमलटार बसाइँ सरे। प्रचण्ड नजिकै बस्न आएको खबरले चापागाउँदेखि खुमलटारसम्मका वासिन्दामा अलिकति आश जाग्यो। उनीहरूको आशा थियो- सडकको दुर्दशा र स्थानीयको दुर्गती आफैंले भोगेपछि दाहालले केही पहल गरिदेलान्। प्रचण्ड तीन महिनादेखि त्यही बाटो हुँदै दिनको दुई/तीनपटक ओहोरदोहोर गरे। स्थानीयले प्रचण्डसँग भेटेर पनि गुनासो सुनाए। उनले चाँडै समस्या गर्न प्रयास बचन दिए। बाटो भने कालोपत्रे भएन। यतिबेला स्थानीयको आशा निराशामा बदलिएको छ। त्यसमा आक्रोश पनि मिसिएको छ। बुधबारदेखि उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई […]
सत्ताबाट चाँडै उत्रिने छैनन् शक्तिशाली पाँच नेता, तर ट्रम्प ?
No Comments on सत्ताबाट चाँडै उत्रिने छैनन् शक्तिशाली पाँच नेता, तर ट्रम्प ?
९ चैत, काठमाडौं । सत्ताको कुर्सी यस्तो हुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि कोही पनि ओर्लिन चाहँदैनन् । यो यस्तो माध्यम पनि हो, जसले विश्वका नेताहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउँछ । एक फाइनान्सियल सफ्टवेयर र डेटा कम्पनीले राजनीतिज्ञहरुसँगको कुराकानीका आधारमा यो अनुमान लगाउने कोसिस गरेका छन् कि विश्वका शक्तिशाली नेताहरु कहिलेसम्म सत्तामा रहन सक्छन् ? यसमा डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिङ, किम जोङ उनदेखि नरेन्द्र मोदीको सत्ता यात्राबारे विश्लेषण गरिएको छ । मोहम्मद विन सलमान, साउदी अरब उनी २०१७ मा साउदी अरबका राजाका […]
OMG सिड्नी विमानस्थलमा जब दुई जहाज आमनेसामने भएपछि… पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला
No Comments on OMG सिड्नी विमानस्थलमा जब दुई जहाज आमनेसामने भएपछि… पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला
काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाको सिड्नी विमानस्थल अष्ट्रेलियाको एउटा महत्वपूर्ण विमानस्थल हो। यो विमानस्थल आधारित भएर क्वान्टास एयरवेज सञ्चालन हुन्छ। यो बाहेक भर्जिन अष्ट्रेलिया, जेटस्टार एयरवेजसहितका विमान कम्पनीहरुले पनि यो विमानस्थललाई आफ्नो दोस्रो हबको रुपमा राखेका छन्। सिड्नी विमानस्थल नजिकै ११ मार्च २०११ मा एउटा यस्तो तस्विर खिचिएको थियो त्यो यतिबेला इन्टरनेटमा चर्चित बनिरहेको छ। फोटोग्राफर डामियन आइलोले खिचेको तस्विरमा क्वान्टास एयरवेज र एयर न्युजिल्यान्डका दुई विमान जुध्न लागे जस्तो देखिन्छ। वास्तविकतामा भने दुई जहाजहरुबीच दुरी निकै नै थियो। क्वान्टासको […]